ᐈ Kune makomo mukati genshin impact ❤️ GOTAUKA.COM
Last updated Jul 16, 2021 559 0
Uri kushamisika kana uri genshin impact Kune makomoUchawana mhinduro pazasi, asi kutanga rega ndikutaurire kuti pane mukana wekutamba mumushandirapamwe online multiplayer modhi neshamwari dzako uye iwe unogona zvakare kuzviwedzera kune ako runyorwa. Iwe unofungei nezve idzi nhau? Kana iwe uchida kuziva kuti ungazviita sei, enda kune izvi link.
Mhinduro ndiHaiwa, zvinosuruvarisa kuti hapana makomo mumutambo uyu unova genshin impact. Iko kune modhi iri pamusoro pekutsvedza icho chiri chinhu chauchazofanira kuvhura gare gare, asi ine nzira huru yekufamba netsoka iyi apo iwe uchizarura iyo yandakambotaura kare.
Ehezve pane mukana weaya makomo mu genshin impact usarase tariro. Pa webhusaiti yepamutemo ye genshin impact, Paimon anobata nezvenyaya yemakomo mumutambo uyu wevhidhiyo unoshamisa anoti:
Kuti mhuka dzakanaka dzeTeyvat dzajaira kusununguka kwenguva pfupi ... vape imwe nguva tione.
Iyo yekuvandudza miHoYo yangu uyo ​​ari kusiya kugona kuwedzera ma mounts mukati genshin impact. Zvingave zvinonakidza uye kurota kuti iwe ugone kupingudza uye kuchovha nguruve yemusango uyezve nedzimwe mhuka dzinotenderera muguta reTeyvat. Izvi zvinogona kuitika munhu haatombofungidzira kuti zvinogona kuitika mumutambo uyu.
Tsvaga kristall mukati genshin impact